I-7 YE-DHT YEBLOCKER SHAMPOOS: I-ANTI-DHT SHAMPOOS ESEBENZAYO (2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda Eyona Shampoos ibalaseleyo ye-DHT
Ngaba ujonge ishampu yebhloko ye-DHT? Siphande ngeyona shampoos ibalaseleyo ye-DHT kwimakethi ukufumana iimveliso ezisebenza ngaphandle kweziphumo ebezingalindelekanga. Yenziwe ngezithako zendalo ezinje nge ketoconazole, biotin, saw palmetto, organic extracts, kunye neeoli eziyimfuneko, ezi shampoos zichasene ne-DHT zingqine ukuba ziyasusa okanye zinciphise amanqanaba e-DHT kwaye zikhuthaze ukukhula kweenwele.
Ukufumana eyona shampoo ilungileyo ye-DHT yokuthintela ilahleko yeenwele, jonga uphononongo lwethu lweemveliso eziphambili ezilinganiswe apha ngezantsi. Ukusuka kwi-shampoo ethandwayo ye-biotin ukuya kwi-anti-thinning shampoo ukuya ekukhuleni kweenwele okuvuselela ishampu, zonke ezi zikhetho ziyaziwa nge-block block ye-DHT ukukunceda uyeke ukulahleka kweenwele. Ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa i-minoxidil okanye i-finasteride, nazi ezona shampu zintle ze-DHT onokuzisebenzisa.
1I-7 ye-DHT blocker Shampoos efanelekileyo kwi-2021
1.1Ukukhula kweLebhu yeLebhu ye-Ultrax evuselela iShampoo
1.2Imephu yeHolistic Biotin Shampoo yokuKhula kweenwele
1.3I-PURA D'OR yoqobo ye-Anti-Thinning Shampoo yeenwele
1.4I-Biology eQinisekileyo yokuKhula kweNwele ngeShampu nge-Natural DHT blockers
1.5Iilabhoratri zokubuyiselwa kweenwele DHT Ukuthintela ishampu yokulahleka kweenwele
1.6I-Honeydew DHT ivimba i-Shampoo yokulahleka kweenwele
1.7Ipropidren DHT blocker eneSaw Palmetto kunye neBiotin
MbiniUyikhetha njani iShampoo elungileyo ye-DHT
I-7 ye-DHT blocker Shampoos efanelekileyo kwi-2021
Ukukhula kweLebhu yeLebhu ye-Ultrax evuselela iShampoo
Njengeshampu yebhlokhi ephezulu ye-DHT enamawaka ophononongo, Ukunyuka kweenwele zeLebhu ye-Ultrax isebenza kakhulu kwaye ixhaswe ngeziphumo eziqinisekisiweyo. Yenzelwe ukukhuthaza ukukhula kweenwele kunye nokuyeka ukulahleka kweenwele, le shampoo iphumeleleyo ye-DHT yamadoda nabasetyhini inazo zonke izithako eziyimfuneko zokondla iinwele zakho ezibhityileyo.
Yenziwe nge ketoconazole, caffeine, saw palmetto, kunye ne-peppermint oyile, ifomula idibanisa iibhloksi ezininzi ze-DHT ukwandisa amathuba akho okulwa nokwakhiwa kwe-DHT.
I-Ketoconazole sisixhobo esidityaniswe ngokwenzululwazi nokuphazamiseka kwendlela ye-DHT, oko kuthetha ukuba ibhloka i-testosterone ekubeni iguqulwe ibe yi-DHT. Kwangokunjalo, enkosi kwiipropathi zayo zokuchasana nokudumba kunye ne-anti-fungal, i-ketoconazole sisixhobo esiphambili kwi-shampoos elungileyo yokulwa nokudumba.
I-saw palmetto sesinye isithako esinokunceda amanqanaba asezantsi e-DHT. Izifundo ezininzi zibonise ukubona i-palmetto isebenza ukunciphisa i-DHT, ngesifundo esinye esibonisa ukuba yehlile amanqanaba ngama-32%. Okona kuncinci, kunokuthiwa i-palmetto inokwenza igalelo ekunciphiseni ilahleko yeenwele kunye ne-baldness yomntu oyindoda.
Okokugqibela, icaffeine isebenza ukumisa ukulahleka kweenwele okungaqhelekanga, ukubuyisela ukukhula kweenwele, kunye nokunciphisa iziphumo ze testosterone kwintloko. Ngokubanzi, unokulindela iifollic ezinempilo kunye nokukhula okuxineneyo.
Zizonke, ezi zinto zinamandla zidibanisa ukwenza ishampu yohlobo lwe-DHT eyenzelwe ngokukodwa eya kuba nefuthe elihle kwizinwele zakho emva kweveki nje. Yenzelwe ukonyusa ukufunxeka, ishampu ayiyi kuyeka ukusebenza wakuba uyihlambile kwaye iya kukondla isikhumba sakho neenwele imini yonke.
Ngelixa konke oku kuvakala kuyinto entle njengonyango, ishampu ikwapakisha iioyile ezifanelekileyo ezenza ukuba zilunge ekuhanjisweni kweenwele kunye nasekulungiseni iinwele. Ngokukhanya okuqabulayo kwe-citrus evumba kamnandi, yeyona shampoo ilungileyo yokulahleka kweenwele uya kuyifumana.
Ngelixa lifikelelekayo, ixabiso alibizi. Kodwa njengeshampu yokulinganisa ephezulu yokubuyela kweenwele, Ukunyuka kweenwele zeLebhu ye-Ultrax kufanelekile kutyalo-mali. Yenziwe e-USA ngezithako ezisemgangathweni kwaye ixhaswe sisiqinisekiso sokwaneliseka se-100%, sicebisa kakhulu le shampoo ye-DHT ye-inhibitor.
Ukufumana iziphumo ngokukhawuleza, sicebisa ukuba uzidibanise nenkampani ekhulisa iinwele ezikhuthaza imeko ebizwa ngokuba Izinwele zeLebhu ye-Ultrax .
Intengiso 11.098 Izinto ezithethwe ngabantu Ukunyuka kweenwele zeLaser zeLebhu | I-Caffeine yokulahleka kweNwele yokuKhula kweNwele yokuKhuthaza iShampu ye-8 oz
UkuQulunqwa kwezeNzululwazi: I-Advanced CaffinoPlex ...
Ukuxinana kwesondlo: Umxube wobunini bezithako ...
Khuthaza i-Scalp: Konke kuqala ngesikhumba ...
$ 67.95 Jonga iAmazon
Imephu yeHolistic Biotin Shampoo yokuKhula kweenwele
I-Maple Holistics iphakathi kweempawu ezaziwayo kwishishini, nakwinkampani Shampoo yeBiotin ithathwa njengenye yeemveliso zokukhula kweenwele kwintengiso. I-Biotin, enxibelelene ngokusondeleyo nokukhula kweenwele ezisempilweni kwizifundo ezininzi zeklinikhi, kubalulekile ivithamini edlala indima ebalulekileyo ekomelezeni iinwele.
Ngelixa i-biotin ingathinteli i-DHT, kubalulekile ukumisa ukulahleka kweenwele kunye nokuvuselela ukubuyela kwakhona. Ngethamsanqa, le fomula ye-shampoo iza ipakishwe ngenani lezinye izinto ezichasene ne-DHT ezingayi kulwa ne-DHT kuphela kodwa zivuselele iinwele zakho kwaye zithambise i-scalp. Izithako zibandakanya i-zinc, ioyile yejojoba, ioyile yekhokhonathi, i-B5, ioyile yomthi weti, kunye neoyile yerosemary.
I-oyile yeJojoba yondla isikhumba sekhanda ngee-antioxidants kunye nee-acid ezinamafutha ukukhusela, imeko kunye nokulinganisa ulusu kunye neenwele. Ioli yeArgan yaseMorocco izisa izibonelelo ezifanayo ngoncedo olongeziweyo lweevithamini A kunye no-E, okukhokelela kwizinwele ezisempilweni eziziva zithambile kwaye zigcwele.
Ioyile yomthi weti inikezela ngepropathi yendalo ye-DHT yokuthintela iipropathi, kwaye uphando lufumanise ukuba ukusetyenziswa kwemixholo kungayimisa imveliso ye-DHT. Okokugqibela, ioyile ye-rosemary ifunyenwe inyusa ukukhula kweenwele ngaphezulu kwenyanga ye-6 kunye neziphumo ezifanayo ne-minoxidil.
Ukubeka ngokulula, ishampu yenza izinto ezimbini kakuhle: ivuselela iinwele zakho ukuba zikhule kwaye ibhloka ukwakhiwa kwe-DHT ukusuka entlonzeni.
Ukongeza, ishampu yi-silicone, i-sulfate, inkohlakalo kunye ne-paraben yasimahla, iyenza ukuba ibe lukhetho olukhuselekileyo emadodeni nakwabasetyhini abanolusu oluthambileyo. Le shampu yohlobo lwe-biotin ikwathintela inkwethu, inamafutha okanye iinwele zeoyile, kwaye igcina isikhumba sakho sasentloko silinganisekile, sikhuthaza ivolumu kunye nobukhulu.
Okokugqibela, amadoda nabasetyhini baya kulithanda ivumba elingakholelekiyo, elilula kakhulu kunye ne-herbal. Ukuba ufuna enye yezona shampu zintle ze-biotin zokukhula kweenwele, Imephu yezeNkcubeko udale ophumeleleyo.
Jonga inkampani I-Shampoo kunye ne-Conditioner Set ukuba ufuna ibutho eligcweleyo lokhathalelo lweenwele zokucheba iinwele.
Izimvo eziyi-30,334 I-Biotin Shampoo yeenwele zokucoca iinwele- IVolumizing Biotin Shampoo yaMadoda kunye neWomens Hair Moisturizer -Sulfate Free Shampoo eneBiotin kunye neShampu yothambisa yeenwele ezomileyo ngaphezulu kwe-95% yendalo eyenziwe
Ukuqinisa ishampu-Zama i-pyrithione zinc ...
I-Shampoo yoKhathalelo lwe-Scalp eyomileyo-i-biotin yethu ene ...
Inamafutha aNdalo-Siyaluthanda ukhathalelo lweenwele zendalo ...
$ 9.95 Jonga iAmazon
I-PURA D'OR yoqobo ye-Anti-Thinning Shampoo yeenwele
IPURA D'OR Anti-Thinning Shampoo kuvavanywe eklinikhi kwaye kwaqinisekiswa ukomisa iinwele kunye nokuyeka ukulahleka kweenwele. Ukuqhayisa ifomula esekwe kwisityalo esebenzayo, imveliso ityebile kwi-DHT blocker efana ne-saw palmetto kunye ne-nettle extract, eya kuthi inyuse kakhulu ubukhulu bezinwele ngokusetyenziswa rhoqo.
Le shampoo esemgangathweni yokucheba iinwele yenziwe ngokudityaniswa kwezithako eziphambili ezili-17, kubandakanya ioyile ye-argan, ioyile ye-amla, umthi weti, i-niacin, ioyile yembewu yamathanga, ioyile ye-rosemary, isicatshulwa seti eluhlaza, ioyile yeentyatyambo ye-hibiscus, ivithamin E, ioyile yembewu yekumin emnyama. , I-pygeum bark extract, i-biotin, i-red korean seaweed, kunye no-He Should Wu.
Ngelixa sisazi ukuba i-saw palmetto ibhloka i-DHT, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba isicatshulwa se-nettle, ioyile yembewu yethanga, ipygeum, iti eluhlaza, kunye neoyile yomthi weti nazo zikwiibhloko ze-DHT kwaye zisebenza ukuthintela i-5-alpha reductase enzyme evelisa i-DHT.
Umdibaniso ongaqhelekanga wazo zonke izinto zendalo, izinto eziphilayo azizukuthintela kuphela ukucheba kwaye zisuse i-DHT, kodwa ziya kuthambisa nokunyusa isikhumba sakho entlokweni, ziphucule ukujikeleza, zondle iifollic, zinciphise ukuluma, kwaye zixhase ukukhula kweenwele ezisempilweni ngokushiya nayiphi na intsalela yeoyile.
Lilonke, oku kwenzelwa ukuba njengesisombululo esipheleleyo kumadoda nakwabafazi. Ifomula yayo emnene iyenza ilungele zonke iintlobo zeenwele, kubandakanya ioyile, eyomileyo, eyonakeleyo okanye eyanyangwa ngombala. Kwaye kunye nezithako eziqinisekisiweyo zezinto eziphilayo zenza i-hypo-allergenic, esivumela ukuba siyincome njengokhetho olukhuselekileyo kubantu abanolusu olubuthathaka.
Ngelixa i-ketoconazole kunye ne-caffeine azikho kuluhlu lwezithako, akukho shampoos kwintengiso ene-block block ye-DHT.
Ukuba uhlahlo lwabiwo-mali kwaye ufuna elona xabiso, IPURA D'OR Igolide yoqobo ye-Anti-Thinning Shampoo inikeza isisombululo sendalo sokumisa ukulahleka kweenwele kunye nokulahla i-DHT. Unokulindela iziphumo kwiinyanga ezintathu ngokusetyenziswa kwesiqhelo, nangona uninzi lwabathengi lucebisa ukuba baqaphele umahluko omkhulu emva kweeveki nje ezimbalwa.
Iingxelo ze-16,136 I-PURA D'OR Ilebheli yeGolide yoqobo eyi-Anti-Thinning Biotin Shampoo (16oz) w / IArgan yeoyile, iNtambo ekhutshiweyo, iSawet Palmetto, uLwandle oluBomvu, i-17 + ye-DHT ye-Herbal Actives, Akukho Sulphate, i-Natural Preservatives, yamadoda nabafazi
I-PURA D'OR YINKOKELI KWIINWELE UKUCWANGCISELA UNYANGO ...
Phucula indlela obonakala ngayo iinwele zakho: Azisekho iinwele ezimbi ...
KHUSELA kwaye WOMELEZE IINWELE: I-Key Key Active ...
$ 29.99 Jonga iAmazon
I-Biology eQinisekileyo yokuKhula kweNwele ngeShampu nge-Natural DHT blockers
I-Shampoo yokuKhula kweenwele eziSulungekileyo yenye imveliso ebalaseleyo elayishwe nge-DHT blocker yendalo, izicatshulwa, iiamino acid, kunye neeoyile ezifanelekileyo. Yenzelwe amadoda nabasetyhini abanezinwele ezinciphileyo okanye ezonakeleyo, oku kulahleka kweenwele kunye neshampu yempumlo iya kushiya iinwele zakho zikhangeleka ngathi ziyatyeba kwaye ziziva zithambile.
Kwabaqalayo, ifomula igcwele ngezithako eziphilayo, kubandakanya i-biotin, i-keratin, i-saw palmetto, ioyile ye-rosemary, iti eluhlaza kunye neevithamini B kunye no-E. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, uphononongo lubonakalisile ukuba i-palmetto kunye nomsebenzi okhutshiweyo weti eluhlaza ukuvala i-DHT.
I-Keratin isetyenziselwa ukomeleza, ukuthambisa kunye nemeko yeenwele ezonakalisiweyo, ukubonelela ngendawo apho iifollic ezinokukhula kwaye zomelele. Kwaye ioyile ye-rosemary iya kukhuthaza ukukhula kweenwele njenge-minoxidil.
Idityaniswe nezinye izithako zendalo, oku kukhula kukhuthaza kunye nokuchasana neenwele ngeshampu iyacoca, ikhusele kwaye ivuselele iifollic kunye nemicu yokubuyela kwakhona.
Ekugqibeleni, I-Shampoo yokulahleka kweenwele echanekileyo yeBhayoloji Udale imveliso yeenwele ezikumgangatho ophezulu eziza kuthoba i-DHT kwisikhumba sakho ngelixa uphucula impilo yeenwele zakho.
4.258 Izinto ezithethwe ngabantu I-Biology eQinisekileyo yeNkulumbuso yeRevivaHair yokuKhula kweenwele | I-Biotin Shampoo kunye neProcapil eqinisekisiweyo yezonyango; I-DHT blocker Keratin Complex | I-Shampoo yokuCoca iinwele kunye nokulahleka kweenwele, Abasetyhini kunye neMadoda Shampoo 8oz
Hlaziya kwaye ubuyisele iinwele ezintle; Ukucacisa kwethu ...
Izithako zendalo; Enye yeemfihlo zeenwele ...
Iinwele ezifanelekileyo kunye neMpilo yeNtloko; Ioyile yeBiotin ikhuthaza ...
$ 30.99 Jonga iAmazon
Iilabhoratri zokubuyiselwa kweenwele DHT Ukuthintela ishampu yokulahleka kweenwele
Iilabhoratri zokubuyiselwa kweenwele yenza enye ye-DHT esebenzayo yokuthintela ishampu yokulahleka kweenwele kushishino. Yenziwe ngezithako ezingaphezulu kwama-20 zendalo eziye zaboniswa eklinikhi kuthintela i-DHT kwi-scalp yakho, le mveliso ifanele ukuqwalaselwa nzulu.
Okokuqala, uluhlu lwezithako lubandakanya iqela elibanzi le-DHT blocker yendalo, kubandakanya i-saw palmetto, iti eluhlaza, icaffeine, ithanga lembewu yeoyile, ioyile ye-rosemary, i-oyile ye-cumin emnyama, isicatshulwa se-pygeum bark, isicatshulwa se-cayenne, isicatshulwa se-reishi mushroom, kunye nezinye iioyile ezifanelekileyo kunye neevithamini.
Njengeshampu yansuku zonke, kufuneka ishiywe ekhayeni lakho okwemizuzu embalwa ukukhulisa ukufakwa. Isiphumo sishampu esusa i-DHT eya kuthi ikhuthaze ukubuya kwemisonto eyomeleleyo, ejiyileyo ngelixa ilungisa iifollic ezonakeleyo kunye neendawo ezinciphileyo.
Ngaphandle kwee-sulfates, parabens, silicones, okanye imichiza erhabaxa, le mveliso ikhuselekile kuzo zonke iintlobo zeenwele kunye nolusu olubuthathaka.
Ukuba ujonge ukwanda kwenani leenwele eliya kuqala ukubuyisela umva ukulahleka kweenwele kunye nokuthamba, ukujonga okupheleleyo, Iilabhoratri zokubuyisela iinwele kwi-DHT Shampoo ixabiseke ngokwenene loo mali!
Intengiso 594 Izinto ezithethwe ngabantu Iilabhoratri zoBuyiselo lweeLebhu Shampoo, iDHT blocker yokuThintela ukuPhulukana neNwele, iSulphate-yasimahla kuMbala weenwele ezinyangiweyo, ukuSebenza kweNtsuku ngokuSebenzayo kweNwele ukujija kweNwele kwaMadoda nabaFazi, i-16 oz
UNYANGO LOKUVUSELELA IINWELE: Kuyanceda kakhulu ...
IINWELE ZOKUQINISA NGOKUSEBENZA: Iqukethe okubalulekileyo ...
UKHUSELEKILE UKUSETYENZISWA: Simahla sulphate, parabens, silicones ...
$ 24.69 Jonga iAmazon
I-Honeydew DHT ivimba i-Shampoo yokulahleka kweenwele
Ukuba ufuna ishampu efanelekileyo yokulahleka kweenwele, awunakuhamba gwenxa ngale nto I-Biotin Shampoo evela kwiHoneydew . Njengoko sele sitshilo, i-biotin yinto ebalulekileyo xa kukhuthazwa ukukhula kweenwele, njengoko yomeleza iifollic hair kunye nemicu.
Ngaphandle koko, ishampu ikwacebile ekuphuculeni iinwele ezinje nge-primrose, ioyile ye-argan, kunye neoyile yomnquma, konke oku kunceda ukunika iinwele ukubukeka okunempilo, okukhazimlayo kunye nokuziva.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa imveliso iqulethe ioyile yekhokhonathi, ijojoba, ioyile yomthi weti, zinc kunye nekeratin, eyenzelwe ukondla isikhumba sasekhanda kunye nokuphucula ukujikeleza kwiingcambu zeenwele.
Ayiziqhayisi ngeyona nto inamandla yokuthintela i-DHT, kodwa umxube wenza umsebenzi omkhulu ekunciphiseni ukulahleka kweenwele, ukuthintela ukoma kwentloko, kunye nokuphucula ukwenziwa kweenwele kunye nevolumu.
Iishampu zeBiotin ziyaziwa nangokuthi ziyeke inkwethu, ukurhawuzelela, ukuphalaza kunye nentsalela yeoyile. Njengeshampu yokuthambisa engenasulphate, isebenza kakuhle ngazo zonke iintlobo zeenwele kodwa isebenza ngokukodwa ekuqiniseni iinwele ezintle. Kwaye ivumba elitsha lobusi livumba kamnandi emva kokuhlamba.
Ukuba ulwa neenwele ezintle okanye ezinciphileyo, sicebisa ukuba uzame IHoneydew yeNdalo yokuNcipha kweNwele yeShampu . Kungathatha iinyanga ezimbalwa ukuqaphela iziphumo ezilungileyo-kodwa ukuba ngandlela thile awuyenzi, inkampani ine-100% yokubuyiselwa kwemali.
5 656 Izinto ezithethwe ngabantu I-Honeydew Biotin Shampoo yaMadoda nabaFazi -Sulphate simahla seVolumu yeShampu yokwahlula iinwele kunye neBiotin Keratin kunye neeoyile eziNyanzelekileyo zoKhathalelo lweeNwele - I-Shampoo yeNwele ePhambili kunye neVithamini yeenwele zeBiotin
I-Biotin Hair Shampoo-Sidibanise ikhokhonathi yendalo ...
I-Shampoo yeVolumizing yeenwele ezi-Thin -I-pyrithione yethu ...
Sulphate Shampoo yasimahla-Sipakisha izinto ezininzi zendalo ...
Ipropidren DHT blocker eneSaw Palmetto kunye neBiotin
Ukongeza kwi-shampoo, i-DHT blocker supplements inokunyusa ukungenisa kwakho ii-inhibitors ze-DHT, ukunceda ukuthintela ukulahleka kweenwele, kunye nokukhuthaza ukubuyela ngokukhawuleza kwakhona. Propidren yipilisi yangaphakathi ye-anti-DHT yangaphakathi enoluhlu olude lwezithako eziphilayo eziqinisekisiweyo zokumisa iziphumo ezibi ze-DHT. Kwaye kukhuselekile kwaye akukho ziyobisi, kuxhomekeke kuphela kwizinto zendalo ukusebenza.
Ipropren iqulethe i-saw palmetto, i-biotin, i-horsetail extract, i-green tea extract, i-nettle extract kunye ne-pygeum bark powder.
Ngaphandle kwe-biotin, zonke ezi ziye zaqinisekiswa ukuba ziyayilwa i-DHT kunye nokubuyisa iinwele. Esinye isithako esiyintloko sisinyithi, esilwa neanemia, esona sizathu siphambili sokulahleka kweenwele kumadoda nabasetyhini.
Olunye uncedo kukuba ifom yeepilisi efanelekileyo iqinisekisa ukuhanjiswa okufanelekileyo, ukondla isikhumba sakho sasentloko ngaphakathi nangaphandle. Isongezelelo sisebenza njenge-multivitamin, kunye nezithako zendalo ezenza ukuba kube lukhetho olukhuselekileyo kubo bobabini nabasetyhini.
Kuya kufuneka uyisebenzise rhoqo kwiinyanga ezimbalwa ukuqaphela iziphumo, kodwa ezinye iimpendulo ziye zalubona utshintsho emva kweentsuku ezingama-30 kuphela. Kungcono ukusebenzisa Propidren ngokudibeneyo nezinye ishampu yebhloko ye-DHT okanye iimveliso zeenwele ukukhuthaza ngcono ukukhula kweenwele.
Iingxelo ze-12,910 I-Propidren nge-HairGenics -I-DHT blocker eneSaw Palmetto yokuThintela ukuPhulukana kweenwele kunye nokukhuthaza iiFollicles zeNwele zokuMisa ukulahleka kweenwele kunye nokuhlaziya iinwele.
Uphando lwezenzululwazi malunga nokulahleka kweenwele lubonakalisile ukuba ...
Iqulethe i-saw palmetto kunye nenye i-dht enamandla ...
Kwakhona kubandakanya iBiotin ukunceda ukomeleza ababuthathaka kunye ...
$ 39.99 Jonga iAmazon
Uyikhetha njani iShampoo elungileyo ye-DHT
Ngelixa iimveliso ezininzi kunye neenkampani zisenza amabango abalulekileyo malunga nokubanakho kokuthintela i-DHT, zimbalwa kula mabango axhaswa sisayensi. Uninzi lwezithako zingena ekwenzeni ishampu okanye isixhobo sokucoca ulwelo-ukusuka kwizithako ezisebenzayo ezinendima ephambili ekuthinteleni ukulahleka kweenwele kwabanye ezenzelwe ukuba imveliso inuke kamnandi okanye yenze ukuba iinwele zakho zithambe.
Xa ukhetha ishampu yebhlokhi ye-DHT, kubalulekile ukuba ufunde uluhlu lwezithako ngononophelo ukuze uqiniseke ukuba luya kusebenza. Kwaye oko kuqala ngokuqonda ukuba zeziphi izinto ezifana ne-ketoconazole kunye ne-saw palmetto-ezinezibonelelo zokwenyani zokukhula kweenwele.
Iziphumo ezilungileyo, sicebisa ukuba usebenzise ishampu yokuthintela i-DHT ngolunye unyango lweenwele ezinje ngefinasteride kunye ne-minoxidil. Ukudibanisa iRogaine kunye ne-anti-DHT shampoo kunokuqinisekisa ukuba uyakwandisa ukusebenza kwezi zisombululo zokukhula kweenwele.
indlela yokufumanisa uphawu lwakho lwenyanga
zithini iimpawu zam ezintathu zezodiac
yintoni irula yam yetshathi
yintoni le mithathu yam